Waa maxay sheekada ka dambeysa astaanta Lego? Hal-abuurka khadka tooska ah
Yaa aan aqoonin astaanta LEGO? Way fududahay qof kasta oo naga mid ah in uu maskaxda ku hayo xusuusta alaabtan ay ku ciyaaraan. Waana taas, summada ayaa la socotay jiilal kala duwan, kuwaas oo la ciyaaray kuwaas oo qaybaha dhismaha, abuuraya adduunyo cajiib ah, muddo dheer.
Astaanta LEGO waa laga yaqaan meel kasta, laakiin qof kastaa ma garanayo sida uu u noqday calaamad sii socota inuu noqdo halbeegga ciyaaraha dhismaha, sidaas darteed daabacaadan waxaan ku baran doonnaa horumarkeeda. Waxaan ka hadli doonaa taariikhda astaanta LEGO iyo wax kasta oo ku xeeran.
Sida aynu ognahay, guusha calaamaddu waxay kuxirantahay dhowr arrimood, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marka la eego guushaas, waa astaanta. Qaybtan naqshadeynta waxay xitaa noqon kartaa midda go'aamisa guusha ama guuldarada astaanta.
1 taariikhda lego
2 Taariikhda astaanta LEGO
Immisa saacadood ayaanu ku ciyaarnay baloogyada LEGO, oo aan suurtagal ahayn in si sax ah loo xisaabiyo. Mid ka mid ah dhinacyada ugu wanaagsan ee calaamaddu waa taas wuxuu ku guuleystey inuu sii adkaysto wakhti ka dib, dhib malahan da'daadu ama haddii aad tahay qof jecel LEGO, weligaa ma joojin doontid abuurista mid ka mid ah xaaladaheeda.
LEGO-yadu waa qabatin iyo caqabad, maskaxdeena, maadaama aad awooddo dhis jilayaal ama xaalado aan la tirin karin. Laga soo bilaabo geesiyaasha sare, kabaha Adidas, garoonka Bernabéu, Diagon Alley oo ka socda Harry Potter, iwm.
Taariikhda LEGO waxay bilaabantay sanadka 1932 ee Danmark. Ole Kirk Kristiansen, ayaa ka furay ganacsi yar oo nijaar ah magaalada Billund, halkaas oo alwaaxa lagu ciyaaro, jaranjarada, saxarada, iwm. isaga iyo wiilkiisa oo 12 jir ah.
Taariikhda astaanta LEGO
Waxay ahayd 1934, markii ganacsiga yar yar uu qaatay magaca LEGO. Bari Magaca wuxuu ka yimid soo gaabinta deenishka ee laba kelmood, dhibic lugeed, oo macnaheedu yahay si fiican u ciyaar.
Marxaladdan, waa marka calaamadda ugu horreysa ee calaamadda la soo bandhigo. Astaantan waxay ahayd lagu soo saaray walxo kala duwan sida bacaha, baqshadaha, stamps, stickersiwm. Wali uma muuqan summadaha alaabta lagu ciyaaro ama alaabta kale ee ay sameeyeen.
Sida la arki karo, waa a calaamad fudud, oo lagu dhisay qoraal qoraal ah oo leh xuduud madow, kuwaas oo tarankoodu kaliya ku socday dukumentiyo ama waxyaabo kale oo la daabacan karo.
Sannadkii 1936-kii, calaamaddu waxay gashay isbeddelkeedii ugu horreeyay iyo sidoo kale, wuxuu bilaabaa in lagu dhejiyo alaabta ay sameeyeen, oo ku dul yaal alaabta lagu ciyaaro alwaax, oo leh shaabadda daabacan ee LEGO Fabriken Billund.
Muddo sannado ah, shirkaddu way sii weynaatay oo way sii korodhay, iyadoo gaadhay 10 shaqaale. Sannado ka dib, wuxuu soo bandhigayaa a naqshad cusub oo calaamad ah, kaas oo ay isticmaalaysay astaanta toy muddo toban sano ah.
La Nooca midabka ugu horreeya ee astaanta, wuxuu soo muuqday 1946. Astaanta waxaa loo dhisay qaab sans serif ah oo loogu talagalay magaca LEGO iyo far cursi ah oo loogu talagalay magaca Klodster.
Intii u dhaxaysay 1949 iyo 1950, calaamada block waxay bilaabeysaa inay soo saarto qaybaha caagga ah ee caanka ah. Alaabada ay soo bandhigeen ayaa ahaa qaar in la dhiso leben la isku xidhi karo iyo waxa ay ugu yeedheen blocks-ka is-qabsada.
Sannad ka dib, 1951, magaca astaanta ayaa iska beddelaya Blocks-ku biirista LEGO Mursten, oo macnaheedu yahay, LEGO blocks. Go'aankan waxaa sameeyay wiilka Ole wuxuuna la yimid naqshad cusub oo calaamad ah taas oo casaanku uu ahaa midabka ugu sarreeya.
Marxaladda 50-meeyadii, calaamaddu waxay isticmaashay saddex calaamadood isku mar Waxay ahaayeen kuwo isku mid ah, laakiin isku mid maaha. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu lahaa magaca LEGO oo ku qoran far geesinimo leh oo aan serif lahayn.
Laba ka mid ah noocyadaas waxay lahaayeen magaca astaanta oo casaan ah. lagu dhejiyay asal jaale ah ama sawir. Dhanka kale, nooca kale wuxuu ahaa far-qoraamad madow, oo ku taal meel cad.
Bartamaha 50-meeyadii, calaamaddu waxay dooratay inay ku jirto qaab oval ah soo qaado magaca astaanta. Marxaladdan, waa marka qoraalka magaca LEGO uu qaato 360 darajo.
Wajiyadii hore loo isticmaali jiray ee sans-serif iyo waxay siinaysaa hab qoraal ah oo leh muuqaal dhow oo saaxiibtinimo badan. Waa far leh xariijimo qaloocan iyo xarfo mug leh, oo aad ugu shabaha farta maanta la isticmaalo.
In astaanta marxaladdan, wuxuu iftiimiyay oval-ka cas ee qoraalka madow, iyo sidoo kale laba dhibcood oo ka mid ah dhinacyada qaabkan, kuwaas oo lagu xiray xariiq toosan.
Shan sano kadib. 1960-kii, qaabka oval-ka ee ku wareegsan magaca astaanta ayaa loo beddelay labajibbaaran. Noocaan, marka laga reebo magaca LEGO, ereyga System ayaa soo muuqday.
Ma aha ilaa 1973-kii, markii la sameeyay astaanta astaanta u ah barta ay ka soo billaabato midka ay maanta adeegsato astaanta. Sannadahan shirkaddu waxay bilawday inay wax-soo-saar iyo suuq-geyn la samayso Maraykanka.
LEGO, korso a Logo ka sii habaysan, sidaan sheegnay, oo aad ula mid ah kan hadda jira. Summadani waxay ka koobnayd xarfo cadcad oo lagu tilmaamay madow iyo jaalle, waxaana la dhigay maya, oo ku taal sool cas oo leydi ah.
Dhinaca kale, typography wuxuu aad ugu eg yahay kii la isticmaali jiray 50-meeyadii, laakiin markan wax yar oo dhumucdiisuna, siinta muuqaal buuran, xumbo badan.
Summadan ugu dambeysa waa la ilaalinayaa illaa sanadka 1998, halkaas oo dib-u-qaabaynta ugu dambeysa ee astaanta la sameeyay iyo taas oo sameysa calaamadda aan ognahay maanta. Kaas oo hab-qoraalka loo qaabeeyey oo xarfaha dulucdoodu ka weyn tahay.
La isku darka midabka joogo in logo tan iyo 1960, caddaan, madow, casaan iyo jaalle ah, sida laga soo xigtay calaamadda, waxaa dhiirigeliyay kala duwan ee midabada aasaasiga ah ee joogo blocks dhismaha ciyaaraha ay.
Waqtigan xaadirka ah, astaanta ayaa ah mid aan isbeddelin muuqaalkeeda sumadda, tan iyo markii la aasaasay waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu adag uguna sarreeya taariikhda. Waa astaan ​​la doonayo, midda ugu yar ee guriga iyo dadka waaweyn labadaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Waa maxay sheekada ka dambeysa astaanta Lego?